About Us - Ningbo Ke Ming Machinery Co., Ltd
Ningbo Yinzhou Ke Ming Imishini Ukukhiqiza Co., Ltd.onguchwepheshe kwakhiwa lost wax Castings utshalomali kanye nemikhiqizo osuphelile carbon lensimbi kanye ongaphakeme ingxubevange steel, kuyinto umphakeli ka Castings utshalomali nge inqubo amanzi ingilazi e China. Siqukethe izindawo ezinkulu 2, kokubili steel ekubunjweni Foundry futhi CNC machining imboni eyenza bona nathi ukuphakela kokubili Castings ukucacisa kanye nemikhiqizo sebeqedile ikhiqiza amandla minyaka yonke ongaba amathani angaphezu kuka-10000, futhi imikhiqizo ngokuyinhloko zithunyelwa eYurophu, eMelika, Japan kanye nezinye izindawo emhlabeni wonke.
Inkampani yethu itholakala edolobheni abadumile zezimboni Yinzhou, Ningbo e China. Kuyinto elula kakhulu lizofinyelelelwa nge isikhundla kunenzuzo ethile. Inkampani yethu yasungulwa ngo-2002, it ihlanganisa indawo ingqikithi 5000 metres square futhi manje employees.We ezingaphezu kuka-50 abe ifektri yesimanje kanye eziphambili CNC imishini machining.
Imikhiqizo yethu ukumboza anhlobonhlobo izimboni kuhlanganise isitimela & ujantshi, imoto & iloli, ukwakhiwa imishini, izimayini imishini, Forklift, imishini yezolimo, shipbuilding, petroleum imishini, ukwakhiwa, valve kanye amaphampu, umshini kagesi, hardware, imishini amandla nokunye. Sinekhono ukukhiqiza imikhiqizo ngokuvumelana imidwebo amakhasimende 'noma amasampula, sigxila kokubili steel carbon futhi ongaphakeme ingxubevange steel. Kuze kube namuhla, ezingaphezu kuka-100 izinto zokusetshenziswa kanye 5,000 izinhlobo imikhiqizo ehlukene kuye kwakhiwa futhi ekhiqizwa kithi. Singabantu ujwayelene izindinganiso ezihlukahlukene ezimbonini, ezifana Chinese GB, ASTM American, Aisi, Din isiJalimane, NF isiFulentshi, JIS Japanese, BS British, Australian NJENGOBA kanye Association of nezindlela zomzila American (Aar) nezinye amazinga zezimboni.
EU UMKHIQIZO FLAT STEEL PRICE ROUNDUP KUSUKELA ...